Usuku My Pet » 6 Izizathu Ukuze Beka Down Your Cell Phone
Uqamba You eyayihlezi buqamama intombazane noma umfana amaphupho akho esidlweni amakha- endaweni hippest entsha in town. Konke kweqa kanye ngendlela ngendlela yasebukhosini yothando kuze ifoni yakho iqala ohlabayo up amavesi nabangani bakho, sister ngisho umama - konke ngibuza ukuthi ngingaxhumana kanjani ukuthi uya noma uma lena "munye." Unayo ezimbili: Silence the isikhali, ukubeka ifoni away futhi indiva it kuze usuku yakho ingaphezulu noma ungakwazi ukuphendula ngamunye umyalezo lokho iza. Uma ukhetha kamuva usebenzisa ingozi hhayi nje kuphela abachitha usuku, kodwa futhi lungaba kungenzeka of romance esizayo nalo muntu manje-amonile.
Kungani kufanele abeke cell phone yakho phansi ngesikhathi usuku, futhi kanjani ukwenza kanjalo kuze amathuba akho okuphumelela esizayo? Thatha look at izizathu eziyisithupha kungani dating ukuphazamiseka kuyinto Ender ubuhlobo futhi yini ongayenza ukuze uvule yakho wagcwalisa tech-love zokuphila ezikuzungezile.
Ubhekene ngokumenza azizwe sengathi nhlobo unimportant. Ngaphandle kukhona esiphuthumayo dire ezifana ilungu lomndeni eliseduze Kuye esibhedlela noma boss yakho esongela nomlilo uma ungayibuyiseli imeyili wakhe, kunesizathu kancane lusichezukise yakho kusukela ngosuku lwakho efonini yakho. Esikhundleni uligqolozele kwesikrini esikhundleni ubuso usuku yakho for the wonke kusihlwa, ifoni yakho away amnike unakisise.
Angase acabange awulona kulo. Cabanga ukuthi ungumuntu ngosuku nomuntu nawe ngempela bakhetha never ukhulume aphinde. Ungenzenjani? Uma impendulo yakho ewela endaweni ethile eduze "akhokhe wakhe bengazinaki" isigaba - yilokho impela wenzani lapho wena usuku ukuphazamiseka. Nakuba empeleni uqamba imiyalezo bud yakho umhlabeleli ukuthi usuku lwakho kuba Uber-amazing, angase athathe izenzo zakho kuwuphawu lokuthi une zero isithakazelo sakhe.
You bheka bad. Zazizokwenzenjani unyoko uthi mayelana imikhuba yakho abampofu? Sengathi ungumuntu esidlweni umndeni, futhi ucabange nenhlonipho efanele etafuleni. Ngisho uma ungekho ncamashi Miss Manners 100 Amaphesenti angu isikhathi, lokhu kungesinye to-do ukuthi kufanele balandele.
Ingxoxo kuyinto Izandla ziyagezana. Izinsuku ezimbalwa zokuqala ukunikeza isikhathi lapho wena abangaba umlingani wakho omusha uthola nje sazana. Ilokhu nomuntu obuka cell yakho, kokuphendula imeyili noma imiyalezo abangane bakho ubeka umgwaqo enkulu uma kuziwa ingxoxo bukhoma okufanele kwenzeke phambi kwakho. Zibuze uma kokutshela BFF yakho ukuthi usuku lwakho kuba "kuhle" ngoba Uliphatha Beagle yakhe like it baby wakhe ungcono kunendoda ukhuluma naye ngothando lwakhe isilwane sakhe.
Ubhekene ashiye hhayi kangako nice kuqala. The pool dating kufinyelela kude naseduze, futhi kukhona njalo omunye inhlanzi ukuthatha endaweni yakho. Ukwenza ashiye isithombe esingesihle ngosuku lokuqala kungenzeka ukuba zingenele imicabango ezingaba khona umlingani wakho phezu ungubani nokuthi uma lizophinda nani. Ingabe ozokusho "yebo" usuku lwesibili ngemva kokubuka uchitha 30 out of yakho 45 amaminithi dinner imiyalezo? Akukona cishe.
Connections zenziwa abantu, futhi hhayi nobuchwepheshe. Nakuba kungenzeka uke wahlangana inthanethi futhi kuqala "wakhuluma" via text, ukwenza uthando uxhumano weqiniso udinga human-to-human langempela ukuxhumana. Bebutha ifoni yakho futhi unikeza usuku lwakho wokubusa free ukwenza okufanayo. Ukukhuluma nabanye abantu ngesikhathi usuku lwakho kuphazamisa wena ekwenzeni mayelana nomunye.
Yabhalwa a Woman Younger Ngemuva Ngesehlukaniso Made Easy